Huawei Mate 10 Pro ၏နောက်ခံပုံများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ Androidsis
Huawei Mate 10 Pro ၏နောက်ခံပုံများကိုကူးယူပါ
Ignacio လိုပက်ဇ် | | Android ထုတ်ကုန်များ, Huawei
ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး သည်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုကိုစျေးကွက်၌စတင်တိုင်းအချိန်တိုင်း lသီးသန့်နောက်ခံပုံများဖြင့်လိုက်ပါသွားသည် သူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းကကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးတွေကိုပြသနိုင်အောင်ဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က OnePlus 5T စတင်ပြီးမကြာမီတွင် Androidsis တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုင်စွဲထားသည် နောက်ခံပုံများ မည်သည့်မော်ဒယ်ကိုမဆိုသင်တို့တွင်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်တို့၏စက်တွင်ထည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယခု၎င်းသည် terminal နှင့် Huawei Mate 10 ၏အလှည့်ဖြစ်သည် Huawei ကပြသခဲ့သည်ကအရာအားလုံးကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ် Samsung နှင့် Apple တို့ကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသော high-end အစားထိုးဖြစ်လာသည့်အခါ၎င်းသည်ကြောက်ရွံ့မှုမရှိပါ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားနောက်ဆုံးနှင့်အရေးအပါဆုံး Huawei terminal မှလာသည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနောက်ခံပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်။
နောက်ခံပုံများအားလုံး, ၄ င်းတို့ဟာ Huawei Pro 10 မှာတွေ့ရတဲ့ resolution အတိုင်းပဲ။ Resolution မှာ ၂၁၆၀ x ၁၀၈၀ ဖြစ်သည်။ ၆ လက်မဖန်သားပြင်နှင့်တစ်လက်မလျှင် 2160 အစက်နှင့် Full HD + မျက်နှာပြင်ကိုပေးထားသည်။ အတွင်းပိုင်း၌ Huawei HiSlicon Kirim 1080 ပရိုဆက်ဆာကိုတွေ့ရပြီး RAM 6GB နှင့်သိုလှောင်မှုပမာဏ 402GB ပါရှိသည်။
ငါပြောခဲ့သလို Huawei Mate 10 Pro ၏နံရံကပ်နံပါတ်များသည် ၁၈ နှင့်ပမာဏသည်ပူနွေးသောအရောင်များမှအအေးအရောင်များအထိတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်ဤကိရိယာတွင်အသုံးပြုသောမျက်နှာပြင်၏အရည်အသွေးနှင့်၎င်း၏ resolution နှင့်အတူဖော်ပြခဲ့သည်။ အထက်။ ၎င်းတို့ကို download လုပ်ရန်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောနောက်ခံကိုနှိပ်ရုံဖြင့်အောက်ခြေတွင်သာနှိပ်ပါ။ မူရင်းအရွယ်အစားဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ရွေးစရာကိုရှာပါ။
သို့သော်သင်ဤဆောင်းပါးကိုသင်ဖတ်နေသည့်နေရာမှသင်၏စက်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရန်ပုံငွေအားလုံးကိုအတူတကွသိမ်းဆည်းလိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါလင့်ခ်ဘယ်မှာလဲcompressed files အားလုံးကို MEGA တွင်သိမ်းထားသောဖိုင်တစ်ခုထဲတွင်ရှာပါ.
ကြိုက်လား 3d နောက်ခံပုံများ? ငါတို့မကွာသေးသော link တွင်သင့်မိုဘိုင်းကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်စုဆောင်းမှုကျယ်ကျယ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » Huawei Mate 10 Pro ၏နောက်ခံပုံများကိုကူးယူပါ
OnePlus 5T အတွက်အကောင်းဆုံးလှည့်ကွက်များ